ပထမဆုံး ကိုယ်တိုင်ထုတ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုရန် တရုတ်နိုင်ငံက အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ပထမဆုံး ကိုယ်တိုင်ထုတ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုရန် တရုတ်နိုင်ငံက အတည်ပြု
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
ပထမဆုံး ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ဈေးကွက်အခြေအနေအရ (conditional marketing authorization) တရားဝင်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံက ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အမျိုးသားဆေးဝါးထုတ်ကုန်များဦးစီးဌာန (NMPA) မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး (inactivated vaccine) ကို Sinopharm နှင့် မိတ်ဖက်ဖြစ်သော တရုတ် အမျိုးသားဇီဝနည်းပညာအုပ်စု (CNBG) လက်အောက်ရှိ ပေကျင်း ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များအင်စတီကျူ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေး၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်-၃ ကြားဖြတ်ရလဒ်များအရ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရာတွင် ၇၉.၃၄ ရာခိုင်နှုန်းထိ ဆေးစွမ်းထက်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် NMPA ၏ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်ကောင်စီ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းက ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Update: China approves first self-developed COVID-19 vaccine
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) — China announced on Thursday that it had granted conditional marketing authorization for its first self-developed COVID-19 vaccine.
The interim results of its phase-3 clinical trials shows 79.34 percent efficacy against COVID-19, meeting the standards of the World Health Organization and the NMPA, according toapress conference by the State Council joint prevention and control mechanism against COVID-19. ■
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူအားလုံးအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ထိုးနှံပေးမည်